पिताले आफ्ना छोराछोरीलाई दिनसक्ने सबैभन्दा राम्रा उपहारहरु
३०औं वर्षमा प्रवेश गर्ने कुरा मानिसले मनपराएको सपना चाहिं होइन तर यो वर्ष पनि १८ वर्ष जतिकै आकर्षक र मनमोहक हुनसक्छ यदि तपाईंले मात्र केहि समस्या-रहित तर गर्नै पर्ने कुराहरुलाई अपनाउनु भयो भने ।३० भनेको धेरै पुरुषहरुको लागि पैसा कमाउने एउटा उमेर हो, एउटा स्थिर व्यवसाय र एउटा सुन्दर र शानदार अवकाश योजनाको तैयारी गर्ने उमेर पनि हो । तर पैसा कमाउने, घर बनाउने, नयाँ गाडि किन्ने यो होड़मा, के तपाईंलाई लाग्दैन तपाईं शरीर, स्वास्थ्य र जोशमा जवान बन्ने त्यो चुस्ततालाई गुमाउँदै हुनुहुन्छ ? परिणाम, तपाईं एउटा वा अन्य जीवनशैली उब्जित रोगको काखमा हुनुहुनेछ । त्यसकारण अब गति कम गर्नुहोस र अलि कति विचार गर्नुहोस। तपाईंको उमेर तपाईंको पक्षमा हुनेछ,तब होइन जब यसबाट सम्पूर्ण शक्ति निकालेर यसलाई एकोहोरोपना र आलस्यताले तपाईं भर्नुहुन्छ, तब मात्र हुन्छ जब तपाईं यसलाई सम्हाल्नु हुन्छ । तपाईं हरेकको जीवनमा ३० वर्ष बिस वर्षको उमेरमा परिवर्तन हुनसक्छ तर त्यो चाहिं टिभी सेटको अगाडि बसेर तपाईंको मनपर्दो खेल हेर्दै र बियर खाँदै चाहिं हुँदैन । त्यसकारण तपाईंले आफ्नो ध्यान र मन संगै लगाउनु पर्छ र तपाईंको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यालाई चुस्त बनाउन विभिन्न विकल्पहरुमा काम गर्ने कोशिस गर्नुपर्छ । आउनुहोस त्यस्ता केहि तरिकाहरुको छलफल गरौँ जुन तपाईंको ३० वसन्त पार तपाईंको स्वास्थ्यको कडी बन्न सक्छ । उन्मत्त भिडको एउटा भाग बन्नुहोस् ३० वसन्त पछि पुरुषहरुको बानी भनेको आफैलाई तिनीहरुका काममा पूर्ण रुपले यति तल्लिन बनाउँछन कि समाजमा घुमिल हुने र मानिसहरुसंग भेटघाट गर्ने समय अत्यन्त थोरै हुन्छ । अध्ययनले पुष्टि गरेकोछ कि ति मानिसहरु जो ठुलो सामाजिक समुहको भागहरु हुन् उनिहरुमा हृदय बिमारको मौका थोरै नै हुन्छ किनकि यसरी तिनीहरु आफ्ना समकालीन जो तिनीहरुका अफिसको फाइल र टिभीमा समय बिताउँछन उनिहरुको तुलनामा खुशी र तनाव-मुक्त रहन्छन् । स्वास्थ्य, सम्पन्न र सँधै व्यायाम संगै बुद्धिमानि रहनुहोस् किशोरहरुका विचमा र २० वर्षकाहरुको विचमा जिममा जानु प्रचलित कुरा मानिन्छ, तर यो त तपाईंलाई ३० वर्ष देखि अत्यावश्यक छ कारण यो उमेरमा सबै रोगहरुलाई टाढै राख्नको निम्ति स्वास्थ्य रहनु महत्वपूर्ण छ । यदि तपाईं जिम जान त्यति मन पराउनु हुन् भने यहाँ मध्य कुनै अन्य व्यायामको तरिकाहरु अपनाउनु होस्: विहानको हिँडाइ जगिंग योगा एरोबिक्स विकल्पहरु असंख्य हुन सक्छन तर तपाईंले आफुलाई आफ्नो जीवनशैली संग सुहाउँदो छनौट गर्नुपर्छ । बेकारको बाकस देखि टाढा बस्नुहोस के तपाईं आफ्नो बेलुकीको समय टिभीको अगाडि बसेर बिताउनुहुन्छ ? हो यो नै निश्चित रुपले तपाईंको अहितकारी बानी हो जसलाई तपाईं प्रश्रय दिंदै हुनुहुन्छ । टेलिभिजनको सेटले तपाईंलाई निर्भर बनाइदिन्छ, जसको अर्थ न्युनतम शरीरको हलचल भन्ने हुन्छ । यसमा व्यायाम भनेको त्यति बेला मात्रै हुन्छ जब तपाईं पपकर्न खान जानुहुन्छ वा विच विचमा आउने विज्ञापनको आवाज बन्द गर्न रिमोट चलाउनुहुन्छ । साथै यसले तपाईंको परिवार र इष्टमित्रसंग बिताउने समय पनि खाइदिन्छ । त्यसकारण अर्को पटक जब तपाईं असिफ बाट घर आउनु हुन्छ, तब तपाईंको छोराछोरीहरु संग गेम खेल्नुहोस् वा श्रीमती संग एउटाs राम्रो गफ गर्नुहोस् वा तपाईंको मित्रको घरसम्म बाटोमा हिड्नुहोस् र केहि ताजा हावाको निम्ति जानुहोस् । धुम्रपानलाई हुँदैन भन्नुहोस् पुरुषहरुलाई तिनीहरुको किशोरावस्था देखि छिटो लाग्ने एउटा सामान्य बानी भनेको धुम्रपान हो । किशोर अवस्था देखि नै धुम्रपान गर्ने पुरुषहरुलाई आफ्ना बानी सुधार्नुपर्छ भन्ने आवश्यकतालाई महशुसनै गर्दैनन् र यो झन जटिल बन्दै जान्छ । अब तपाईंको उमेर ढल्कदै गरेको अवस्थामा तपाईं यसको असरको निम्ति नभएर सबै तनाव र संकष्ट देखि सहारा पाउन पिउनु हुन्छ वा बानीको असर हुनसक्छ । के तपाईंलाई थाहा छ धुम्रपान र निकोटिनमा भर पर्ने बानीले चाहि त्यो चुरोट बाट होस् वा खैनिसुर्ती खाएर होस्, तपाईंलाई फोक्सो क्यान्सर, मुटु नली थुनिने र त्यो भन्दा डर लाग्दो जोखिममा पर्न सक्छ ? तपाईंको २०औं वसन्तमा भन्दा यो उमेरमा चाहि बढी नै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । धुम्रपान बन्द गर्नुहोस् र तपाईंको वरिपरि भएको शुद्ध हावालाई हेर्ने कोशिस गर्नुहोस् । जति कम मद्धपान, उति लामो जीवन मद्धपानले केवल तपाईंको कलेजोलाई आक्रमण गर्ने र तपाईंको जीवनको मिठो पलहरु बाट टाढा लैजाने मात्रै होइन तर तपाईंलाई ति सबै रोगहरु लाग्न सक्ने बनाउछ जसको संकेतहरु तपाईंको मध्य आयु देखि नै देखिन शुरु हुन्छ । उमेर वृद्धि संगै बढ्ने बिमारहरु भनेको चिन्ता, रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोल वा अन्य मुटु सम्बन्धि रोगहरु हुन् । के त्यसको मतलब यो तपाईंले एकै दिन वा दुइ दिनमा सक्नुपर्छ भन्नु हो ? होइन, तपाईंले एक दिनमा यसको संख्या घटाएर एक देखि बढिमा दुइ गिलास बनाउनुपर्छ तब तपाईं एउटा स्वस्थ जीवनको निम्ति तन्दुरुस्त बन्नु हुनेछ । माछा मार्न जानुहोस अब यो भन्नुको अर्थ तपाईं आफै भोजनको निम्ति माछा मार्न जानुहोस वा बल्छी थपेर बस्नुहोस् वा भोकै बस्नुहोस भनेको होइन । माछालाई तपाईंको दैनिक भोजनको एउटा भाग बनाउनुहोस भनेको हो । तपाईं ३०औं वसन्तमा पाइला टेक्नु हुँदा माछा वा समुद्री जीवको खानाले तपाईंको सक्षम-शरीर बनाउँछ र रोग प्रतिरक्षाको ताकत बढाइदिन्छ । एउटाइ माछाको श्रोतबाट आवश्यकीय प्रोटिनहरु, भिटामिनहरु, आवश्यक तेल, जिङ्क, सेलेनियम आदि प्राप्त गर्न सकिन्छ । हड्डी जोश महिलाहरुमा तिनीहरुको ३०औं वसन्तपछि एउटा सामान्य रोग भनेको क्याल्सियमको कमि हो जसले जोर्नीहरुको दुखाइ प्रमुख रुपमा हुनेगर्छ, अब यसलाई पुरुषहरुले पनि कहिल्यै वेवास्ता गर्नुहुँदैन कारण परिवर्तित जीवनशैली संगै, पुरुषहरु पनि यसका शिकार भईरहेकाछन् । ३० औं वर्ष पछिको उमेरमा तपाईंको हड्डीमा क्याल्सियम घनत्वको ह्रासले तिनीहरुलाई भाँचीन सक्ने र हड्डी बिग्रिने जोखिम बढाउँछ। फिजियोथेरापी र असल खानपानको बानीले तपाईंलाई अझै फुर्तिलो बनाउँछ र जोर्नीहरुलाई चुँइकिने समस्यालाई सफा गर्छ ! अझ बढि घाम अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ कि हरेक दिन १५-२० मिनट घाममा बस्नाले ओस्टेओपोरोसिस, ढाड दुखाइ, बाथ जस्ता रोगहरु बाट परै राख्छ । भिटामिन डि को आवश्यकता पूर्ण हुन्छ र सबै शारीरिक कमजोरीहरु कम हुन्छ । त्यसकारण घाममा केहि समयको निम्ति निस्किनुहोस र आफै यसको नतिजा अनुभव गर्नुहोस् । अस्वस्थ्यकर खाना नखानुहोस् पुट्ट बाहिर निस्केको भुँडीहरु प्राय ३० वर्ष लागेका पुरुषहरुमा देखिने सामान्य अवस्था हो । तपाईं यो लिएर जिउनै पर्छ भन्ने छैन ! मोटोपन धेरै रोगहरुको शुरुवातको विन्दु हो । त्यसकारण तपाईंलाई चाहिएको केवल तपाईंको स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान पुर्याउनु नै हो । तपाईंको किशोरावस्थामा मन थाम्न नसकिने बर्गर र पिज्जाहरुलाई अब दुखित भएर मुख सम्म नल्याई केहि मिटर पर बाटै आँखाले हेर्नु मात्रै पर्नेहुन्छ। अब तपाईंको प्लेटमा थप चिज र बटर हालिने छैन । अलि कठोर छ तर स्वास्थ्य रहने कुरा कुनै दोश्रो विकल्प बिना गरिहाल्नुपर्छ। त्यसकारण माथि उल्लेखित बुँदाहरु पुरुषहरुले कुनै पनि उमेरमा पालना गर्न सक्छन तर ३० लागे पछि अझ कडाईका साथ पालना गर्नु पर्नेहुन्छ ! यसरी, तपाईंको जीवन निरोगितामा र पूर्णतामा जिउनुहोस् !
बच्चा जन्माउन भन्दा अघि केवल महिलाले मात्रै आफ्नो स्वास्थ्यको हेरविचार गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु भएकोछ ? बुबाहरुले पनि आफ्ना स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउनु पर्नेहुन्छ !तपाईंले एउटा बच्चा पाउने निर्णय गरेको समय देखि, सम्पूर्ण ध्यान हुन्-लागेकी-आमा तर्फ केन्द्रित हुन्छ । र यो कुनै कारण विना भएको पनि होइन, अबको ९ महिना बच्चालाई बोक्ने व्यक्ति उनि नै हुन् । तर यसको अर्थ पुरुषको भूमिका केहि कम महत्त्वको छ भन्ने होइन। हुने-वाला-बाबा ले उसको जीवनको आर्को पाटोको निम्ति आफैलाई तयार पार्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर जीवन शैलीलाई अपनाउदै प्रजनन एउटा बढ्दै गरेको समस्या हो । तथ्यांक अनुसार ४५% भन्दा बढी प्रजनन समस्या पुरुषहरुसंग सम्बन्धित छ । त्यसैकारण, स्वास्थ्य खानपान, व्यायाम र स्वास्थ्यपूर्ण जिउनुले यी समस्याहरुबाट छुटकारा पाउने तपाईंको मौकालाई बढाई दिन्छ । पोषणयुक्त खानामा विर्य निर्माणमा फरक ल्याउँछ । त्यसैले अस्वास्थ्यकर खानालाई हटाउनु होस् केहि समयको लागि र स्वास्थ्यकर जीवनशैली अपनाउनुहोस् । प्रत्येक दिन पुरुषहरुलाई कम्तिमा १२ देखि १५ एमजी को जिङ्क चाहिन्छ । अल्प अवधिको जिङ्कको कमिले पनि शुक्रको मात्रा र टेस्टोटेरोनको मात्रा घटाउन सक्छ, जुन स्वास्थ्य विर्यको निम्ति धेरैनै आवश्यकता छ । जिङ्क पाईने राम्रो श्रोत भनेको सकेको बोडी (एउटा कपमा ३.५५ एमजी हुन्छ), बदाम, अन्नहरु, सिफूड, र कुखुराको मासु (२.३८ एमजी प्रति आउन्स) । पुरुषको प्रजननमा सुधार ल्याउन र विर्य कमजोरी जोगाउन भिटामिन र क्याल्सियमको नियमित सेवन गर्नै पर्छ। क्याल्सियमको प्राकृतिक श्रोत जस्तै छाली-रहित-दुध र दहि खान सकिन्छ । कम्तिमा पनि ९० एमजीको भिटामिन दैनिक रुपमा लिनुहोस् । यसले प्रतिरक्षा शक्तिलाई बढाइदिन्छ। अझ बढि पनि चाहिन सक्छ यदि तपाईंले धुम्रपान गर्नु हुन्छ भने। फोलिक एसिड स्वास्थ्य विर्यको निम्ति एउटा उर्जानै हो । बुबाहरुलाई यसको ४०० माईक्रो ग्राम चाहिन्छ र यसको पोषणको राम्रो श्रोत भनेको हरियो पात भएको सब्जीहरु हो। हुने-वाला-बुबाहरुले मोचाको अतिरिक्त कप लिन छुट छ । क्याफिनले पुरुषहरुलाई विर्यको चुस्ततालाई उत्तेजित बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । धुम्रपान र मधपान छोड्नुहोस् एक पटक तपाईंले बच्चा बनाउने कोशिस शुरु गर्नु भयो भने तपाईंको जोडीको रमाइलो खत्तम हुन्छ, तर तपाईंको इच्छाको के हुन्छ ? पुरुषहरुलाई निम्ति पनि त्यस्तै हुन्छ । धुम्रपान छोड्ने समय अहिले नै हो, र ज्यादा मधपान गर्न बन्द गर्नुहोस् । एउटा पुरुष जसले धुम्रपान गर्छ उसको विर्य संख्यामा ह्रास आउँछ र विकृत विर्य जुन बच्चा बनाउन असक्षम हुन्छ । अत्याधिक वा टन्नै मधपानले गुणस्तर विर्य बनाउने क्षमतामा नराम्रो संग असर गर्नसक्छ । व्यायाम तपाईंले अहिले सम्म गर्नुभएको छैन भने तपाईंको दैनिक तालिकामा व्यायामको समयलाई सामेल गर्नुहोस् । व्यायामले सामान्य स्वास्थ्य, ताकत, र विर्यको गुणमा सुधार ल्याउँछ । १५ मिनटको हिँडाइ बाट शुरु गर्नुहोस र यसलाई क्रमिक रुपमा बढाउनु होस् यदि तपाईंले पहिले कहिल्यै व्यायाम गर्नुभएको छैन भने । यदि तपाईंले बच्चा बनाउने कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, कसिलो लुगा लगाएर व्यायाम नगर्नुहोस। यसले विर्यलाई बिगार्छ । नियमित रुपमा सौनामा वा तातो टबको बसाई, लामो साइकल चलाउँदा, वा अन्य त्यस्ता क्रियाकलाप जसले गर्दा अण्ड्कोश अत्याधिक तातिन्छ र विर्यको स्वास्थ्यलाई असर पुर्याउँछ र यो बाट जोगिनुपर्छ । स्वास्थ्य परिक्षण हुने-वाला-बुबाले पूर्ण स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु राम्रो विचार हो जस बाट बच्चा बनाउन भन्दा अघि सुधार गर्नु पर्ने कुनै खराबी छ कि भनि थाहा लाग्छ। ध्यान दिनु पर्ने कुनै त्यस्ता समस्याहरु निम्न छन्:भेरीकोसील, भनेको अण्ड्कोशमा नशा फुलेको अवस्था हो, अण्ड्कोशलाई थामेको छालाको थैली । यसले बाँझो निम्त्याउँछ। यो अवस्था पूर्ण रुपले निको पार्न सकिन्छ, त्यसैले तपाईंको डाक्टरलाई यसका विकल्पहरुको विषयमा कुरा गर्नुहोस् । लिङ्ग कडा दोष, मधुमेह, र प्रोस्तेटाइटिसले बाँझोपन ल्याउन सक्छ । यौन सम्बन्ध द्वारा सर्ने विमार, जसले बाँझोपना ल्याउन सक्छ। तपाईंको डाक्टरले यसको परिक्षण गरेर उपचार गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्नसक्छ । तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई युरोलोजिस्ट कहाँ वा पुरुष प्रजनन विज्ञ कहाँ पठाउन सक्छ यदि तपाईंलाई थप परिक्षण वा उपचारको आवश्यकता पर्यो भने । तपाईंको डाक्टरसंग वंशानुगत जन्म कमजोरी केहि छ कि भनि छलफल गर्न नविर्सिनुहोस् । उहाँलाई तपाईं र तपाईंक श्रीमतीको परिवारको स्वास्थ्य इतिहास बताउनुहोस् । अर्थलाई व्यवस्थित गर्नुहोस एउटा बच्चा बजेटको योजना बनाउनुहोस् । पक्कै नै तपाईं आफ्नो बच्चालाई उत्तम नै दिन चाहनुहुन्छ । अहिलेदेखि नै योजना शुरु गर्नुहोस् । यी खर्चहरुलाई ध्यान दिनुहोस जस्तै बच्चाको खाना, डायपर, खेलौनाहरु, डाक्टर भेटघाट, कपडाहरु र बच्चाको स्कुल । यसले तपाईंलाई भविष्यमा मद्दत मिल्नेछ । र उत्तम समय अहिले नै हो जहाँ तपाईं बच्चा बनाउने कुराको योजनाको चरणमा मात्रै हुनुहुन्छ । बच्चाको आगमन हुन भन्दा अघि नै यो समयको फाइदा लिनुहोस् त्यसैले तपाईंको जागिर, विमा र बजेट योजनालाई मिलाउनुहोस् । यदि तपाईं र तपाईंको जोडीले आशाहरु, लक्ष्यहरु र रणनीतिहरुको विषयमा अहिले नै छलफल गर्दै सहमत हुनु भयो भने, पछि गएर पैसाको विषयमा हुनसक्ने विवादहरुलाई रोक्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको तनावलाई फ्याँक्नुहोस् बाहिर तिर घुमफिर गर्नाले तपाईंको सक्षमतालाई वृद्धि गर्न सक्छ । त्यसकारण विदा भ्रमणमा जाने सल्लाह काम लाग्दो हुन्छ । नियमित ध्यान वा कुनै व्यायाम अभ्यास गर्नुहोस जसले तपाईंको तनावको मात्रालाई कम गर्न मद्दत गर्छ । पित्रित्त्व सम्बन्धि वा अभिभावकत्त्व सम्बन्धि पुस्तकहरु पढ्ने कोशिस गर्नुहोस र अग्रिम रुपमा सुझाव र सल्लाहहरु सिक्नुहोस् । त्यसकारण कम्मर कस्नुहोस् र विन्दास केटो बाट विन्दास बुबामा परिवर्तन हुनको निम्ति तैयारीहरु शुरु गर्नुहोस् । तपाईंको जोडीलाई तपाईंको बच्चा पाउने कुरामा उत्तिकै उत्सुक हुनुहुन्छ र ध्यान दिनुभएको छ भनि हर किसिमले महशुस गराउने तपाईंको जिम्मेवारी हो ।
वंशाणुगत एचआईभी यसको सबै भन्दा खराब रुप हो जसमा यो रोगले दबाब दिन सक्छ, जहाँ बच्चाले कुनै गलती नगरि श्रापसंग जन्मिएको हुन्छ । यो भाइरस जसको कारणले एड्स हुन्छ सजिलै एक संक्रमित आमाबाट नवजात शिशुमा संचारित हुन सक्छ, र उपचार बिना, लगभग २०% संक्रमित आमाहरुका बच्चाहरुलाई एचआईभी लाग्छ ।उच्च भाइरल लोड भएका आमाहरूले संक्रमित बच्चाहरूलाई जन्म दिइएको पाइएको छ । तथापि, कुनै पनि सन्ख्याको भाइरल लोड सुरक्षित हुँदैन किनकि गर्भावस्थाको समयमा कुनैपनि समय संक्रमण हुन सक्छ । यस चरणमा उच्च स्तरको सावधानी आवश्यक हुन्छ । प्राय डिलिवरीको समयमा संक्रमण हुन्छ तर यो एक मात्र तरिका हैन जसको माध्यमबाट यो फैलिन सक्छ । एचआईभी-संक्रमित आमाहरुले स्तनपान गर्नुहुँदैन, किनकी भाइरस स्तन दूधबाट पनि संचारित हुन सक्छ । एचआईभीको संचारण सम्भावना कम गर्नका लागी एन्टिरेट्रोभाइरल औषधिको प्रयोग गरिन्छ । डेलिभरिको समय छोटो राख्नाले संचारणको जोखिम कम हुनसक्छ । अधिकांश पटक पोजिटिभ आमाहरुबाट जन्मिएका बच्चाहरु एचआईभीको लागी पोजिटिभ हुन्छन । एचआईभी संक्रमित शिशुहरुको सिस्टममा एन्टिबडी बन्छ र परीक्षण गर्दा पोजिटिभ नै हुनेछ । तर यदि बच्चाहरु संक्रमित छैनन भने, बच्चाको रगतमा भएको आमाको एन्टिबडी बिस्तारै गायब हुन्छ र एक देखी एक र आधी वर्ष पछी परीक्षण गर्दा नेगेटिभ हुनेछ । एचआईभी पोजिटिभ महिलाहरूले गर्भवती हुनु अघि एचआईभीका लागि एन्टिरेट्रोभाइरल औषधीहरुसँग सम्भावित समस्याहरूको विचार गर्नुपर्छ । यी औषधीहरुको छनौट, संकेत र प्रतिवादबारे चिकित्सकसँग कुरा गर्नुहोस् । प्रारम्भिक गर्भावस्थाको समयमा विलक्षण र उल्टीको कारणले औषधीको मात्रा छुट्न सक्छ, जसले एचआईभीलाई प्रतिरोधको विकास गर्ने मौका दिन्छ । केही चिकित्सकहरु जन्म खोटको जोखिम कम गर्न गर्भावस्थाको समयमा औषधि रोक्न वा परिमार्जन गर्न मन पराउँछन् । छोटो अवधिको उपचारले एचआईभीलाई नयाँ नवजात शिशुमा संक्रमणको खतरा हटाउन वा कम गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ; तर, छोटो अवधिको उपचारले औषधिहरूको प्रतिरोधको जोखिम बढाउँछ । गर्भावस्थाको पहिलो ३ महिनाको समयमा एन्टिरेट्रोभाइरल औषधीका कारण जन्म खोटहरूको खतरा हुन्छ । गर्भावस्थाले आमाको एचआईभी रोगलाई बिगार्दैन, तर गर्भवती हुने योजना बनाएका कुनै एचआईभी पोजिटिभ महिलाले उपचारका किसिम र सबै प्रविधिहरू बारे राम्रोसँग आफ्नो चिकित्सकसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
सुत्केरी उदाशिनता नयाँ आमाहरूको सामना गर्नु पर्ने सामान्य अवस्था हो, र यो सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ ।बच्चा जन्मिनु उत्सवको कारण हो । विशेष गरी भारत जस्तै देशमा, जहाँ पारिवारिक सम्बन्ध नजिक हुन्छन्, घरमा उत्सवको वातावरण छ । तथापि, कहिलेकाहीँ आमाहरुले पनि उत्साह प्रकट गर्न सक्दैँनन । यो खुशीयालिको बीचमा नकारात्मक भावनाहरूको यो लहर नयाँ आमाको लागि भ्रमित हुन सक्छ । रोचक तरिकाले यी भावनाहरु असामान्य छैनन्, किनकि धेरै नयाँ आमाहरूले सुत्केरी उदाशिनताको सामना गर्छन्, जसलाई बेबी पनि ब्लुज भनिन्छ । यो एक भावुक प्रतिक्रिया हो जुन डेलीवरीको केही दिन पछि सुरु हुन्छ र २ हप्ता भन्दा बढी टिक्दैन । सुत्केरी उदाशिनताका लक्षण के के हुन ? क्रोध वा चिन्ताको भावना । बच्चामाथी को रुचिको कमी । भोकको कमी र निद्रामा वाधा । रुने र उदासीपन । झर्कोपन र अधिक भावुकता । दोष, लाज वा निराशाको भावना । तपाईंको पुर्व मनोरञ्जनात्मक रुचि, आनन्द वा खुशीमा कमी । बच्चा वा आफैलाई हानिकारक विचारहरू उठ्ने सम्भावना । सुत्केरी उदाशिनताको कारण के हो ? सुत्केरी उदाशिनता भिन्न कारकहरूको संयोजनको कारण हुन सक्छ । हार्मोनल परिवर्तनहरू: हार्मोनको स्तरमा हुने परिवर्तनले तपाईंलाई थकित, सुस्त र उदास पार्न सक्छ । तपाईंको रगतको मात्रा, रक्तचाप, प्रतिरक्षा प्रणाली र पाचनमा हुने परिवर्तनले थकान र मूड स्विंगमा योगदान दिन सक्छ । भावनात्मक कारकहरू: परिवारमा नयाँ आगमनको साथ ब्याकुल महसुस हुँदै, र दिन रात बच्चाको स्याहार गर्दा, यसले तपाईंलाई अनिद्रा, आत्ंक र चिन्ता ग्रस्थ बनाउन सक्छ । नयाँ आमाहरूले गर्भवती भएपछि आफुलाई कम आकर्षक महसुस गर्दछन । तपाईंलाई महसुस हुनसक्छ कि तपाईं वरपरका मानिसहरू तपाईं भन्दा बढी बच्चामा चिन्तित छन्, र तपाइँलाई बेवास्ता गरिरहेका छन ।यी सबै भावनात्मक कारकहरुले सुत्केरी उदाशिनता हुनसक्छ । अन्य कारकहरू: स्तनपान, वित्तीय तनाव, र सम्बन्ध समस्याहरू जस्ता समस्याहरूले पनि सुत्केरी उदाशिनतामा योगदान दिनसक्छ. सुत्केरी उदाशिनता सँग एक कसरी व्यवहार गर्दछ ? पूर्ण आराम लिनुहोस् र पर्याप्त घण्टाको लागि सुत्नुहोस् तपाईंको पतिसँगको गुणस्तर समय बिताउनुहोस् स्वस्थ आहार खानुहोस् ताजा हवाको लागि बिहान वा साँझ पैदल यात्रा गर्नुहोस् योगा वा अन्य व्यायामहरु अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुहोस् तपाईंको भावनाहरू तपाईंको पति वा साथीहरूसँग बाड्ँनुहोस् अधिक काम नगर्नुहोस् केही नयाँ आमाहरूको समूहहरूमा सामेल हुनुहोस् व्यक्तिगत उपचार वा सल्लाहकारहरूको परामर्श लिनुहोस् याद गर्नुहोस्, सुत्केरी उदाशिनता एक निको पार्न नसकिने समस्या होइन । यो केवल एक अस्थायी मन्स्थिती हो, तपाइँ समस्याको बारेमा सजग भएर जुन पराजित हुन सक्छ।
संवेग सबै बालबालिकाको हुर्कने प्रक्रियाको भाग हो । तिनीहरुसँग सही तरिकाले व्यवहार गर्नु बच्चाको व्यक्तित्वको निर्माणमा धेरै आवश्यक रहेको हुन्छ ।जब तपाईंको बच्चालाई संवेग रहिरहेको हुन्छ, यो सामान्यतयाः उसले चाहेको र गर्न नसकेको केहि कुरामा हुन सक्छ । संवेग फ्याँक्नु भनेको बच्चाले उसले चाहेको कुरा गर्ने तरिका हो । यसको विपरीत, बच्चाले मागेको कुरा दिनु आमाबाबुको लागि सजिलो तरिका हुन सक्छ । तर सँधै सम्झनुहोस् कि सधैं यसरी दिनु राम्रो भनें होइन । बच्चालाई यसमा बानी पर्न सक्दछ र यसले तपाईंलाई पनि केही झन्झट भएको साबित पनि गर्न सक्छ । नाई भन्न सिक्नुहोस्, बिस्तारै तर दृढतापूर्वक । तपाईंको नाई को लागि स्वीकार्य कारण दिन र त्यहि समयमा एउटा विकल्प देखाएर चमत्कार गर्दछ । सबैजना भन्दछन् र गर्दछन्, बच्चाहरू सम्हाल्न त्यति सजिलो छैन । यदि तपाईंको बच्चा सिमामा बस्न सक्दैन र भनेको मान्दैन भनें, यो चरण पास गर्न दिनुहोस् । रिसले चिच्याउनु, सामानहरु टाढा फ्याँलेर बच्चालाई केही सजिलो हुन सक्छ । जब रिस घट्दछ, आफूले गरेको विनाश हेर्दै र यसको पुरै बेकारले बच्चाले उसको प्रयास ब्यर्थको भयो भनेर महसुस गर्दछन् । तर सावधान रहनुहोस् कि बच्चाले यो प्रक्रियामा शारीरिक रूपमा चोट लाग्दैंन । सार्वजनिक स्थानहरूमा हुने संवेग धेरै लाजमर्दो हुन सक्छ । यस्ता अवस्थाहरुमा, तपाईंको बच्चासँग बहस वा गाली वा उसलाई हतार गर्न आदेश नदिनुहोस् । यसले बच्चालाई झन धेरै अटेरी बनाउँनेछ । रिसको आँधी शान्त नहुँदासम्म पर्खनुहोस् । उसलाई शान्त स्थानमा लैजानुहोस् र बिस्तारै तर दृढतापूर्वक कुरा गर्नुहोस् । यहाँ सम्झनुपर्ने एउटा कुरा भनेको बच्चालाई तपाईंको असजिलोपना र चिन्ताको बारेमा कहिल्यै सार्वजनिक स्थानमा हुदाँ थाहा हुन नदिनुहोस् । बालबालिकाहरू धेरै चतुर हुन्छन् र उनीहरूको पक्षमा काम गर्न यो प्रयोग गर्न सक्छन् । बच्चा हुन सजिलो छैन र पक्कै पनि एउटा बच्चाको आमाबाबु हुन पनि त्यति सजिलो छैन । तपाईंको बच्चा समयसँगै स्कूल जान सक्ने हुनेछ र उसले यस चरणलाई पराजित गर्नेछ ।
बच्चाहरू धेरै अचम्मका प्राणीहरु हुन् ! तिनीहरूका बारेमा हामीले केहि चिन्ता गर्नु पर्दैन । नीलो- आँखाको आश्चर्य: धेरैजस्ता बच्चाहरु नीलो आँखा लिएर जन्मिएका हुन्छन् । जन्मको समयमा आँखाको रङ्गको निर्णय गर्ने मेलानिन रङलाई विकसित भएको हुदैँन । त्यसैले बच्चाहरु आनुवंशिक मेकअपको बिरुद्ध नीलो/ हल्का आँखाहरु भएर जन्‍मिएका हुन्छन् । बच्चाहरु ६- ७ महिना भएको उमेरमा, वर्णहरू विकास हुन सुरु हुन्छ र बच्चाको आँखाको रंग आमाबाबुको आनुवंशिक मेकअप अनुसार परिवर्तन हुन्छ । जीवनको लागि चिन्ह: प्रत्येक तीन शिशुमा एकजना जन्म चिन्ह लिएर जन्मिएको हुन्छ ! कुनै आँसु हुदैँन: त्यो सत्य हो ! नयाँ जन्मिएका बच्चाहरूले कुनै आँसु बगाउँदैनन् । लार्किमल डक्ट र आँसुका ग्रन्थिहरू राम्रोसँग विकसित भएका हुन्छन् तर तिनीहरूले चिप्लोपनाको लागि मात्र पर्याप्त आँसूहरू उपलब्ध गर्दछन् । वास्तविक आँसुहरु एक महिनाको उमेरपछि देखा पर्न सुरु हुन्छ । घस्रने चमत्कारहरू: नयाँ अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि बच्चाहरू जन्मने बित्तिकै घस्रन सक्छन् । तिनीहरु कहिले बाँकी रहन्छन् भनें, तिनीहरू आफ्नो हात खुट्टाहरू प्रयोग गर्न केही सक्षम हुन्छन् र तिनीहरुको खानाको लागि बाटो खोज्छन् उदाहरणका लागि आमाको स्तन । हामीलाई लाग्छ कि तिनीहरू साना असहाय जीवहरु हुन् ! तापक्रमको संवेदनशीलता: बच्चाहरु तापक्रम परिवर्तन र शरीरको तातोमा धेरै संवेदनशील हुन्छन् । हुनत बच्चाले चिसो पार्नको लागि कपडाहरु फ्याल्न सक्दैन, यी अन्य चीजहरु गर्नकोलागि चलाख छ । जब बच्चालाई चिसो हुन्छ, उ वरिपरि बढि सर्नेछ र यदि यो धेरै तातो छ भने उ घाममा नुहाएको जस्तैगरि अझै सुतेर बस्न सक्दछ । छुने थेरापी: छुनु बच्चाहरु, अपरिपक्वहरुमा पनि हुने सबैभन्दा धेरै विकसित संवेदना हो । छुने अनुभुति मुख सबैभन्दा संवेदनशील बनि टाउकोदेखि खुट्टाको औंलासम्म विकास हुन्छ । तिनीहरूले आफ्नो मुखमा सबै चीज राख्दा कुनै आश्चर्य हुने छैन । छोटो- दृष्य: बच्चा जन्मेको बेलामा छोटो दुरीमा मात्रै देख्ने हुन्छन् । तिनीहरूको दृष्टि ८ देखि १२ इन्च सम्मको सीमामा रहेको हुन्छ । यदि तिनीहरू यो सीमा भित्र छन् भनें, तिनीहरूले मानिस र वस्तुहरूलाई स्पष्ट रूपमा हेर्न सक्छन् । मस्तिष्कको आकार: नवजात शिशुहरुमा मस्तिष्क यस्तो दरमा बढ्छ कि पहिलो वर्षको अन्त्यसम्ममा, मस्तिष्क जन्मेको आकारको भन्दा दोब्बर हुन्छ र यसको अन्तिम आकारभन्दा आधा हुन्छ ! पाल्मर समात्ने: नयाँ जन्मिएका शिशुहरूको बाँदरले जस्तो बलियोसँग समात्न सक्ने हुन्छ । बच्चाहरु धेरै बलियोसँग समात्छन् कि यदि तपाईंले तिनीहरूलाई एउटा हातमा झुण्ड्याउनुभयो भनें, तिनीहरू आफ्नो तौल समर्थन गर्न थाम्न सक्दछन् । यो सम्भवतः शुरुको बाँच्ने स्वभाविक प्रवृत्तिबाट शुरु भएको हो । यो बलियोसँग समात्ने क्षमता केही महिना पछि घट्छ । स्वादको तन्तु: बच्चाहरुको जिब्रो वरिपरि र माथि र छेउ छेउमा लगभग १०,००० भन्दा धेरै स्वादका तन्तुहरु रहेका हुन्छन् । तिनीहरू हुर्कदै जाँदा, यी अतिरिक्त स्वादका तन्तुहरू हराउँछन् ।
तपाईंको दिमागलाई सकारात्मक फ्रेममा राख्न कोशिश गर्नु बेकुफी लाग्नसक्छ l तर फाइदाहरु धेरै हुनसक्छन् lकसैले सही भने, “हामी हाम्रो विचारहरुको कुल जम्मा हौ” l त्यसैले तपाईंसँग जति बढी सकारात्मक विचारहरु छन् वा सोचाइको क्षमता छन्, तपाईंको जीवन यात्राको परिणाम त्यतिनै बढी सकारात्मक हुनेछ l थप सकारात्मक सोच र आफैलाई सशक्त बनाउन यहाँ केही जुक्तिहरु छन्: एउटा दैनिक सकारात्मक सोच हुने दैनिकीमा हिड्नुहोस् l साधारणतया त्यस्तो समय जब तपाईं ठिक उठ्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् आधी जागेको अवस्था आफैलाई सकारात्मक विचारहरु दिन सुरु गर्नु उत्कृष्ट हुन्छ l त्यो समयमा दिमाग सुझावलाई बढी स्वीकार गर्ने हुन्छ l तपाईंले आफ्नो दिमागलाई तपाईंको अवस्थाबारे र तपाईंले आफु र आफ्नो परिवारको लागि के प्राप्त गर्ने आशा गर्नुहुन्छ त्यो बारे खुशी र सकारात्मक विचारहरु भर्न सक्नुहुन्छ l सकारात्मक सोचको राम्रो तरिका सृजनसिल सकारात्मक दृश्यावलोकन हो l एउटा निश्चित समयमा, केवल आफ्नो जीवन आफुले चाहने तरिकामा हेर्नुहोस् l यो दिउँसो कल्पना गर्ने भन्दा फरक छ l सृजनसिल दृश्यावलोकनले तपाईंलाई कार्यको लागि जागरुक बनाउँछ भने दिउँसै सपना देख्ननाले तपाईंलाई चाहेको कुरा सोच्नेमा सिमित गराउँछ l यदि तपाईंसँग आफ्नो जीवनको निश्चित क्षेत्रहरुमा कठिनाइ छ भने, काममा भनौ वा तपाईंको सम्बन्धलाई लिएर, एउटा सकारात्मक परिणाम कल्पना गर्नुहोस् l यसले सकारात्मक नतिजा पाउन तपाईंको दिमागलाई थुप्रै कार्य योजनाहरु बनाउन व्यस्त गर्नेछ l सकारात्मक पुष्टिकरणहरु आफैलाई सबै राम्रो छ भन्ने एउटा महान् तरिका हो l आफैसँग धैर्य रहनुहोस् किनकि तपाईंको दिमागले तपाईंले पुष्टि गर्नुभएको आधा कुराहरु पनि बिश्वास गर्नेछैन l पुष्टिकरणहरु तिनै बारे हुन् l तपाईं के हुनुहुन्छ र के प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ बारे तिनीहरु कथनहरु हुन् जुन तपाईंले आफ्नो दिमागलाई दिनुहुन्छ l सकारात्मक पुष्टिकरणहरुले तपाईंलाई तपाईंको हृदयले वास्तवमै के चाहन्छ त्यसबारे आफ्नो दिमाग रिप्रोग्राम गर्न मद्दत गर्नसक्छ l जान दिनुहोस् l जब तपाईं कुराहरु मानसिक रुपमा जान दिनुहुन्छ त्यति बेलाको सुन्दर आत्मसमर्पणको भावना महसुस गर्नुहोस् l एउटा व्यस्त व्यक्ति भएर तपाईं प्रत्येक अवस्थाको परिणामहरु नियन्त्रण गर्न पुग्नुहुन्छ र तपाईंले आशा गरेजस्तो भएन भने नराम्रो महसुस गर्नुहुन्छ l सम्झनुहोस् कुराहरु समय समयमा नराम्रो हुनसक्छन् l तपाईं जस्तै, जीवन उत्कृष्ट छैन त्यसैले किन अरुबाट उत्कृष्टता आशा गर्ने ? त्यो तपाईले बोकिरहनुभएको भावनात्मक झोला त्यागुहोस् l संसारको बोझ तपाईंको काँधमा रहनु आवश्यक छैन l सामुहिक चेतनाको बारे तपाईंले बुझ्नुपर्छ l त्यस्ता अवस्थाहरु बारे सोच्नुहोस् जब कुराहरु कसैको लागि अत्यन्तै नराम्रो हुनपुग्छ l यो संसारमा ति अभागी व्यक्तिहरुको लागि मौन प्रार्थना पठाउनुहोस् l कोही अपरिचित व्यक्तिलाई प्रार्थनाको खाँचो भैरहेको हुनसक्छ l यो तपाईंमा अनेक तरिकाले फर्कनसक्छ l कोही अरुलाई सकारात्मक व्यक्ति बन्न मद्दत गर्नुहोस् l यसले तपाईंको सकारात्मक सोचको विश्वास पुनःपुष्टि गर्न मात्र सक्छ l सकारात्मक उर्जा त्यो हो जसलाई प्राकृतिक हिसाबले सबैले खोज्छन् र हामीले हाम्रो जीवनमा नकारात्मक प्रभाव भएकोले हाम्रो साथीहरु र परिवारजनलाई आरोप पनि लगाउन सक्छौ l यो किसिमको विचारले हामीलाई कतै पुराउदैन l त्यसको सट्टा अर्को कुन उत्कृष्ट विकल्प हो त्यसबारे सोच्नुहोस् l तपाईंले कसरी नकारात्मक उर्जा वा अनुभवहरुलाई सकारात्मकमा बदल्न सक्नुहुन्छ त्यसबारे सोच्नुहोस् l सुरुमा तपाईंले प्रतिरोध सामना गर्नुहोला तर सम्झनुहोस् यदि तपाईं सकारात्मक हुनुहुन्छ भने तपाईंको स्वामित्वमा सकारात्मकता हुन्छ l
ध्यान प्रमुख रूपमा कसैको मनलाई प्रशिक्षित गर्ने एउटा कार्य हो, कुनै गुणलाई महसूस गर्नको लागि वा आफै स्वयंको रूपमा बुझ्नको लागि एउटा माध्यम हो । यसको उद्देश्य आफ्नै चेतनालाई बढाउने एउटा निश्चित विधा हो । विभिन्न प्रकारको ध्यानमा सचेतना र ध्वनिमा आधारित ध्यान पनि हुन सक्छ । जबकि धेरै समय अगाडि, ध्यान केहि व्यक्तिहरूका लागि एउटा स्थान थियो, आज यसको लाभको लगातार बढ्दै गएको शोधको साथै ध्यान एउटा एक अभ्यास बनिरहको छ जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न मदत गर्छ । ध्यानको एउटा विशेषताहरू मध्ये एक हो तपाईको भट्कि रहेको मनलाई दबाउनलाई कुनै पनि खालको दबाव दिँदैन । के आवश्यक छ भने तपाई आफ्नो दिमागलाई हेर्नुहोस् र यो यो भट्की रहेको पनि हेर्नुहोस् र विस्तारै यसलाई आराम गर्न दिनुहोस् । यसरी तपाई आफ्नो ध्यानको चरणको अन्तमा कुनै अवशिष्ट चिन्ता बाँकी रहदैन । तीव्र स्मृति: हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमताहरूमध्ये हाम्रो स्मृति हो । तपाईको मस्तिष्क र शरीरमा अत्यधिक मात्राको तनावले कार्यस्थल र घरको मागको कारणले गर्दा तपाईको स्मरण गर्ने क्षमतामा नकारात्मक प्रभावको उच्च सम्भावना हुन्छ । यो ध्यान जागरुक दिमागमा केन्द्रित हुन सक्छ जहाँ ध्यानको ध्यान एक विशेष शारीरिक संवेदनामा हुने गर्छ । यसले तपाईको दिमागलाई शान्त गर्छ र हातमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुन सिकाउँछ, त्यसैले तपाईको दिमाग अधिक तीव्र र चाँडै सम्झन सक्षम हुन मदत गर्छ । तनावसँग सम्झौता गर्ने: तनाव जुनसुकै व्यस्त सहरहरूमा आफ्नो जीवनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको लागि मन्त्र हो । अफिसमा हतारमा पुग्नुदेखि डेडलाइनमा काम गर्नुसम्म र थकित भइ घरमा गाह्रो काम तल्लीन भइ आफूलाई खोज्नु प्राय मानिसहरूलाई यो एउटा दैनिक जीवनको शर्त हो । ध्यान तपाईको आफ्नो शरीरको उर्जाको तपाईकै नियन्त्रणमा ल्याएर मजबूत तरिकाबाट तनाबको सामना गर्न दिन्छ र यो तरिकाबाट तपाई उनीहरूलाई प्रभावित ढंगले च्यानलाइज गर्न शक्ति दिन्छ । दुखाइ कम गर्ने पेनकिलरहरू: भर्खरै गरिएको एउटा चिकित्सा अध्ययन, विशेष रूपमा जुन २०१० मां मोन्ट्रियलमा आयोजना गरिएको थियो जसमा देखाएको थियो कि जेन ध्यानको अभ्यास मस्तिष्कको यसतो तरिकाले संरचना गर्छ कि यसको भावना अरु दुखाइसँग लड्ने क्षमता बढाउदै जान्छ । मुख्य रूपमा बौद्ध भिक्षुहरूद्वारा यो अभ्यास गर्ने जेन ध्यानको रूप जुनमा तपाई आफ्नो सास र आसनको बारेमा ध्यान केन्द्रित गरेको हुनुपर्छ र आफ्नो मनलाई विस्तारै विस्तारै शान्त बनाउनुपर्छ । यो तरिकाबाट तपाईले ती पेनकिलरहरूलाई पर राख्न सक्नुहुन्छ र दुखाइ कम गर्न आफू जन्मिदा हुने क्षमतालाई बढाउन सकिन्छ । खुशीको भाग: प्रीफ्रन्टल कोर्टेक्स दिमागको एउटा भाग हो जुन सकारात्मक भावना र भावनासँग सम्बन्धित हुन्छ । ध्यान गर्ने मान्छेको यस क्षेत्रमा धेरैभन्दा पनि धेरै गतिविधि गरेका देखेका छन् । प्रमुख पत्रिकाहरु र शोध संस्थाहरुले डिप्रेशनलाई कम गर्न र ध्यानमा केंद्रित गरेको छ र यो पत्ता लगाउको छ कि ध्यानले व्यक्तिको आफ्नो जीवनको नियन्त्रण गर्ने महसूसको लागि मदद गर्छ र त्यसैले, डिप्रेशन र नकारात्मक सामना गर्नको लागि भावनाहरू अधिक क्षमताको बनाउने गर्छ तपाईको हृदयको लागि राम्रो: तपाईको हृदयको सुचारु कामको लागि दुई लाभकारी ध्यानका प्रकार छन् जुन हो जेन र ट्रान्सेन्डेन्टल ध्यान हो। ट्रान्सेन्डेन्टल ध्यान, यसको नामको अनुसार, तपाईलाई चिन्ता ध्यानको मार्फत् आफ्नो चिन्ताहरू पार गर्न मद्दत गर्छ । दैनिक ध्यान गर्नाले ४० प्रतिशत भन्दा बढी स्ट्रोक र हृदयघातको सम्भावना कम गर्न मद्दत गरेको पाइएको छ ।
स्वस्थ कालो कपालको लागि सही पोषण मुख्य तरिका हो lहामी सबैको जीवनमा कुनै समय कपाल फुल्ने हुन्छ l कोही त्यो छिटै पाउँछन् र अरु भाग्यमानीहरु जब उनीहरु ५० वर्षको हुन्छन् अनि पाउँन सक्छन् l भारतमा आजभोलि ७०% महिलाहरुमा समयमा भन्दा अगाडी कपाल फुल्ने र झर्ने समस्या छ l कपाल फुल्नुको कारणहरु के हुन् र यदि तपाईको कपाल छिटै फुल्न सुरु हुँदा के गर्न सकिन्छ ? कपाल फुल्नु र झर्नुको सम्भावित कारणहरु के हुन्? खानामा पोषणको कमि l अत्यधिक तनाव चायाँ थाईराइड समस्या, रक्ताल्पता र भिटीलिगो जस्ता रोगहरु l केही औषधीको साइड इफेक्टहरु कपालको समस्याहरु चुरोट र रक्सी पिउने महिलाहरुमा बढी देखिन्छ l बच्चा जन्मिने र रजनोवृति हुने समयमा प्राय महिलाको कपाल झर्ने हुन्छ l छिटो फुल्ने वंशानुगत ढाँचा आजभोलीको सौन्दर्यको प्रकियाहरु जस्तै कलर गर्ने, ब्लिच गर्ने, रंगाउने, सेट गर्ने, सिधा गर्ने कारणले छिटै कपालको समस्या हुन्छ l वातावरण प्रदुषण उपचार र रोकथाम एउटा सन्तुलित खाना खानुहोस् l प्रत्येक खानामा तपाईको शरीरमा सही पोषणहरु पुग्छन् भन्ने निश्चित गर्नुहोस् l यदि तपाई कम रगत हुने बिरामी हुनुहुन्छ भने सही औषधी सेवन गर्नुहोस् l यो मूल कारण हुनसक्छ l राम्रो निद्रा लिनुहोस् l तनाव नलिनुहोस् l तेल नियमित लगाउनुहोस् र मसाज गर्नुहोस् l प्रशस्त पानी पिउनुहोस् l केमिकलहरुबाट टाढानै बस्नुहोस् l फुलेको कपाल लुकाउन के गर्नुपर्छ ? तपाईको कपालमा अमलाको तेल लगाउनुहोस् त्यसलाई स्वस्थ राख्न l हिना, कागतीको रस, फलामको कन्टेनरमा बनाएको फेनुग्रिक दानाको पेस्ट लगाउनुहोस्, त्यसलाई रंग लगाउँन र फुलेको घटाउनुहोस् l नरिवलको तेलमा गुजबेरी टुक्राहरु उमाल्नुहोस् l जब त्यो कालो हुन्छ, कपालमा त्यो लगाउनुहोस् l यदि तपाईसँग ४५-५०% फुलेको कपाल छ भने तपाईले स्थायी कपाल रंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ l
कोलेस्टेरोलको विषयमा सबैथोक
के तपाइँ त्यो भयानक टाउको दुखाईबाट पीडित हुनुहुन्छ ?एकदमै पीडादायक लगातार टाउको दुखाईले जसलाई पनि हैरान पार्न सक्छ । माइग्रेनको लक्षण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भिन्न हुन्छ । कसैलाई पीडा सुरु गर्नु अघि चक्कर आउँछ । यो प्रकाश, अन्धोपन, वा चमकदार चमक हुन सक्छ । केही अन्यहरूलाई काउगुती वा हातहरूमा पिन्-र्-सियो अनुभुती अनुभव हुन्छ । यसलाई औरा भनिन्छ । टाउको दुखाई औरा देखेको ३० मिनेट भित्र सुरू हुन्छ र ४ देखि ७२ घण्टा सम्म टिक्न सक्छ । उज्यालो, आवाज्, बास्ना तर्फ अधिक संवेदनशीलता, र उल्टी हुनु, भोकको कमी र थकान, चेतनारहितता, काउगुति, वा कम्जोरी सबै माइग्रेनमा समान्य हुन । माइग्रेनको कुनै स्थायी समाधान छैन । मान्छेहरुले वर्षौको लागी दुख पाउँछन र पेन किलर खाईराख्छन् । टाउको दुखाईको सुरुवातमा खाए मात्र पेन किलरले मद्दत गर्दछ । माइग्रेनको सुरुवात गर्ने चीजहरूलाई विचार गर्नुहोस् र तिनीहरूबाट बच्न प्रयास गर्नुहोस् । केहि जीवनशैली परिवर्तनहरूले माइग्रेनलाई केही हदसम्म रोक्न मद्दत गर्न सक्छ । राम्ररी सुत्ने । निद्राको कमी माइग्रेनको कारण हुनसक्छ । नियमित रूपमा उपयुक्त घण्टाको लागी सुत्ने गर्नाले आक्रमणहरू रोक्न मद्दत गर्नेछ । नियमित समयमा नियमित खाना खानाले भोक लाग्दा टाउको दुख्ने मान्छेहरुलाई माइग्रेनबाट बचन मद्दत गर्द्छ । नियमित अभ्यासले शरीरलाई पुनजिवित गर्न र माइग्रेन र धेरै अन्य रोगहरू रोक्न मद्दत गर्दछ । तनाव माइग्रेनहरूको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो । तनावबाट बच्नुहोस् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सिकानाले माइग्र्रेनलाई टाढा राख्नेछ । क्याफिनले धेरैमा माइग्रेन सुरुवात गर्दछ । क्याफिनबाट बचनुहोस् । यदि यो छोड्न सम्भव छैन भने घटाउनुहोस् । रक्सी सीमित गर्दा पनि धेरै फाइदा हुनेछ किनभने रक्सी र हेङोवर यसको कारण हुन सक्छ । ध्यान र विश्राम उपचारलेले पनि माइग्रेनको दुखाई रोक्न मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
रतन्धो भनेको रातमा वा मधुरो प्रकाशमा हुने कमजोर दृष्टि हो lयहाँ केही खाना र खाने तरिकाहरु छन् जसले तपाईंको दृष्टि सुधार्न र रतन्धो रोकथाम गर्न मद्दत गर्नेछ: पालक र अरु सागहरु जस्ता गाडा हरियो पात भएका तरकारीहरु खानुहोस् l तिनीहरुमा उच्च मात्रामा लुटेन, जिजेनथिन हुन्छ, स्वस्थ आँखाहौर्को लागि चाहिने पोषणहरु l चुरोट नपिउनुहोस् l दैनिक एक गिलास रेड वाइन ठिक छ तर रक्सी पिउनुहुदैन l हाइड्रोजनीकृत तेल, रिफाइन गरेको कार्बोहाइड्रेट र धेरै सुगरबाट टाढा रहनुहोस् l जहिले बाहिर चम्किलो प्रकाशमा जाँदा सनग्लास लगाउनुहोस् आँखालाई हुने सम्भावित क्षति रोक्न l अम्बर र ग्रे रंगको लेन्सहरु अल्ट्राभायोलेट किरणहरु विरुद्ध प्रभावकारी हुन्छन् l एउटा आँखा विशेषज्ञ भेट्नुहोस् र आवश्यक भए राती हाँक्दा लगाउने ग्लासको लागु सल्लाह लिनुहोस् l राती मधुरो प्रकाशमा नहाक्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईंले अर्को दिनसम्म काम काम धकेल्न सक्नुहुन्छ l ठुलो शहरमा राती राम्रो लाइटको अवस्थाहरुले पनि रतन्धोको समस्या हुने कसैलाई गाह्रो हुनसक्छ l भिटामिन ए बढी हुने खानाहरु जस्तै पालक, गाँजर, मेवा, ब्रोकोली र आँपहरु तपाइको दैनिक आहारमा थपिनुपर्छ l माछाको तेल भिटामिन एको लागि राम्रो स्रोत हो l कड-लिभर तेललाई औषधीको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ l केही जंगली बिरुवाहरुलाई पनि भिटामिन एको राम्रो स्रोत मानिन्छ तर तिनीहरु मौसमी हुन्छन्, साना मात्रामा उपलब्ध हुन्छन् र तिनीहरु बारे धेरै थाहा छैन l सिमिहरु भिटामिन एको राम्रो स्रोत हुन् l तिनीहरु विशेषगरी शरद ऋतुमा सेवन गरिन्छ l अन्डाहरु भिटामिन एको राम्रो स्रोत हुँ l दैनिक रुपमा अन्डा खानुहोस् l उच्च कोलेस्ट्रोल हुने मान्छेहरुले खानुपर्छ, यद्दपी अन्डाको मात्रामा ध्यान दिनुपर्छ l खुर्सानीहरुमा पनि भिटामिन ए राम्रो मात्रामा हुन्छ तर राख्ने तरिका, सुकाउने तरिकाले भिटामिन एको तत्व घटाउँछ l गाँजरहरु अर्को राम्रो स्रोत हुन् l तिनीहरुमा भिटामिन एको तत्व बढी हुन्छ र तिनीहरु महँगो छैनन् पनि l
हस्तमैथुनका ५ फाइदाहरु
एउटा महिलाको महिलावारी चक्रमा ‘सुरक्षित समय’ भन्नाले उनी गर्भवती हुने मौका एकदमै न्यून रहनु भन्ने बुझाउँछ l यौनमा संलग्न हुनु एउटा आनन्ददायी कुरा हो l यसबाट रमाइलो गर्ने सबभन्दा राम्रो तरिका गर्भवती हुने डर नभई यसमा संलग्न हुनु हो lसबै यौन सम्पर्कको कार्यले गर्भवती बनाउँदैन । यस्ता दिनहरु हुन्छन् जब गर्भ बस्ने मौका उच्च हुन्छ र अन्य दिनहरु पनि हुन्छ जसमा मौका लगभग शुन्य हुन्छ । एउटा मस्तीपूर्ण यौन जीवनको मज्जा लिनको निम्ति यी दिनहरु थाहा गर्नुहोस् ! रगत बग्न शुरु भएको दिनदेखि राजस्वाला चक्रको शुरुवात हुन्छ र त्यसको लगभग २८ दिनमा अन्त हुन्छ, औसतमा डिम्ब उत्पादन रजस्वला चक्रको १४औं दिन तिर हुन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा १४औं दिन राम्रो मानिन्छ । हरेक महिलाहरुको राजस्वाको चक्र फरक फरक हुने भएकोले, डिम्ब उत्पादन हुने समय पनि फरक हुन्छ । त्यसकारण डाक्टरहरुले प्रजनन समयलाई रजस्वला चक्रको १२औं दिन देखि १८औं को रुपमा हिसाव गर्छन । यो अवधि भनेको डिम्ब उत्पादनको संभावनाको समय हो र गर्भ बस्ने संभावना उच्च हुन्छ । पहिलो देखि ७औं दिन सम्म र १९औं दिन देखि अर्को चक्रको शुरुवात सम्मका दिनहरु ति दिनहरु हुन् जहाँ डिम्ब उतपादन हुने संभावना धेरै कम हुन्छ । यसको अर्थ तपाईंले यी दिनहरुमा प्रेम सम्बन्ध बनाउन सक्नुहुन्छ, यी दिनहरु भनेको गर्भ बस्ने संभावना अत्यत्नै न्यून हुन्छ । यी ति महिलाहरुको लागि लागू हुन्छ जसको महिनावारीको चक्र नियमित छ । चक्र अनियमित भएको अवस्थामा भने, तपाईंले सुरक्षित समय पत्ता लगाउन अलिकति गणितको हिसाव गर्नु पर्नेहुन्छ । उदाहरणको लागि यदि तपाईंको छोटो चक्र २६ दिनको र लामो चक्र ३१ दिनको छ भने, तब २६-१८=८ र ३१-१०=२१ २१औं दिनमा ८औं दिन गर्भ बस्ने दिनहरु हो; पहिलो दिन देखि ७औं दिन सम्म र त्यस पछि २१औं दिन देखि अर्को चक्रको शुरुवात सम्म ति दिनहरु हुन् जुन गर्भ बस्ने डर बिना सुरक्षित यौन सम्पर्कको आनन्द लिन सकिन्छ । सुरक्षित अवधि मा यौन सम्पर्क गर्ने विचार नै पूर्ण-सुरक्षित विचार पनि होइन । धेरै महिलाहरुको अनियमित राजस्वालाको चक्र हुन्छ र एक बाट अर्को महिलामा फरक पर्छ । त्यसैकारण सुरक्षित अवधि भनिएको कुरा, सत्यतामा, त्यस्तो सुरक्षित पनि छैन ! त्यसकारण नचाहिएको गर्भ रोक्नको लागि कन्डमहरु र अन्य निरोधकको पद्दति जस्तै पिल्सहरु प्रयोग गर्नु नै उत्तम हुन्छ ।
राम्रो बुवा बन्ने ९ तरिकाहरु
सामान्य रजोनिवृत्ति लक्षणहरु
च्याप्टो पेटको लागि १० उपायहरु
Q मेरो हजुरबुवा अहिले ८६ वर्षको हुनुभएको छ, उहाँको दोस्रो हृदयघात भएको थियो, र डाक्टरले उहाँको प्लास्टिक शल्यक्रियाद्वारा रक्तनलीहरुको मर्मत गर्ने वा एन्जियोप्लास्टी गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । के यो आवश्यक छ ? वा उहाँको धेरै उमेर भएकोले कुनै अन्य सरल अपरेसन गर्न सकिन्छ
मुटुमा रगत बोकिरहेको रक्त नलीमा बाधा भई खुम्चिएको बेलामा एन्जियोप्लास्टी आवश्यक हुन्छ । बाधाको पुर्याइएको मात्राले तपाईंको हजुरबुबाको एन्जियोप्लास्टी गर्न पर्छ वा पर्दैन भनेर निर्णय गरिन्छ । एन्जियोप्लास्टी सरल र सुरक्षित प्रक्रिया हो । चिन्ता नगर्नुहोला ।
Q छाला पोल्ने रोगको सामान्य स्रोत के- के हुन् ?
छाला पोल्ने समस्या सामान्य प्रकारको सम्पर्कबाट हुने रोग हो । तपाईंको छाला पोल्दा यस्तो हुने गर्दछ । साधारण स्रोतहरू निम्न प्रकारका रहेका छन्: रासायनिक तत्वहरू जस्तै मादक पदार्थहरु, तार्पिनको तेल, शुद्ध तेलहरू, सौन्दर्य प्रसाधन सामाग्री वा छालाका उत्पादनहरू, दुर्गन्ध रोक्ने चीजहरु, कडा साबुन, लुगा वा भाडां धुने सरफ, सीमेन्ट ।
Q कसरी पेटमा भएको बोसो घटाउन सकिन्छ ?
कसरी समग्र तौल घटाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिँदा तपाईंको पेटको भागबाट थप बोसो बढ्न कम गर्न मद्दत गर्नेछ । तपाईं केहि व्यायामहरु जस्तै खुट्टा उठाउँने, दोबार्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई तल्लो पेटमा बोसो घटाउन मद्दत गर्नेछ । बाहिरको खाना, जङ्क खाना र धेरै तेलमा तारेको खाना खान रोक्नुहोस् । हरियो पात भएको सागसब्जीहरुको सेवन गर्न बढाउनुहोस् । १ चियाको चम्चा कागतीको रस र मह एक गीलास तातो पानीमा हालेर हरेक बिहान खाली पेटमा पिउनुहोस् । स्वस्थ आहार र नियमित व्यायाम सँगसँगैं गर्दा तौल घटाउन सजिलो हुन्छ । आहार योजना बनाउनुको लागि एकजना आहारविद वा डाईटियनसँग परामर्श लिनुहोस् जुन तपाईंको लागि स्वस्थबर्द्धक हुनेछ ।
Q बहु-व्यक्तित्व सिण्ड्रोम वा लक्षण भनेको के हो ?
डिसएसोसिएटिभ पहिचानको विकार वा बहु-व्यक्तित्व विकार एउटा धेरै दुर्लभ मानसिक विकार हो । यसलाई कम्तिमा दुई विशिष्ट र अपेक्षाकृत स्थायी पहिचान वा पृथक व्यक्तित्व अवस्थाहरुद्वारा चिनाइएको हुन्छ जसले वैकल्पिक रूपमा एउटा व्यक्तिको व्यवहार नियन्त्रण गर्छन, र साधारण बिर्सने बानीद्वारा वर्णन नगरि महत्वपूर्ण जानकारीको लागि स्मरण हानीको रुपमा लिइन्छ । यो यसको निदान वा उपचार सम्बन्धी कुनै स्पष्ट सहमति नरहेको एउटा सबैभन्दा विवादास्पद मनोरोग विकारहरुमध्ये एक हो ।
Q भियाग्राले कसरी काम गर्छ ?
भियाग्रामा सेल्डेनाफिल सिट्रेट हालिएको हुन्छ । यसको उपभोग गरेपछि रगत सञ्चार बढ्छ । रगतको आपूर्ती लिङ्गको भागमा वृद्धि भएपछि, यसको परिणाम स्वरुप लिङ्ग उत्तेजित हुन्छ । यसको प्रयोग प्रायः यौनाङ्ग उत्तेजित नहुने व्यक्तिहरुद्वारा गरिन्छ ।
Q मृगौलाले काम नगर्ने लक्षणहरू के- के हुन् ?
लक्षणहरू व्यक्ति नै पिच्छे फरक हुनसक्छ । सामान्यतया: मृगौलाले काम नगर्ने प्रारम्भिक चरणमा लक्षणरहित हुन्छ तर रोग बढेसँगै लक्षणहरु विशिष्ट हुन सक्दछ । संकेत र लक्षणमा वाकवाक लाग्ने, वान्ता हुने, भोक नलाग्ने, थाक्ने, कमजोर हुने, पिसाब उत्पादनमा परिवर्तन, तरल पदार्थको धारणा, कुर्कुच्चा र खुट्टा सुन्निने, श्वासको कमी, लगातार चिलाउने, बाडुँली लाग्ने, उच्च रक्तचाप, कठिन ध्यान, असामान्य हृदयको ताल, सुत्ने समस्याहरु समावेश हुन्छन् । यदि छोडिएमा, जीवनमा खतरनाक परिस्थितिहरू विकास हुन सक्छ ।
Q मेरो लिङ्गबाट यौन सम्पर्कको समयमा रगत बग्दछ र यो दुख्दछ । मेरो उमेर ३१ वर्षको भयो ।
तपाईंको यौनकार्यको समयमा आफैंलाई चोट लागेको जस्तो देखिन्छ । कृपया चोटको कारण र थप व्यवस्थापन निर्धारण गर्न चिकित्सकलाई भेट्नुहोस् । त्यही समयमा स्वच्छ बनाएर राख्नुहोस्, निको नहुँदासम्म यौन सम्पर्क रोक्नुहोस्, कपासको अण्डरवेयर लगाउनुहोस् ।
Q मेरो दाहिने अण्डकोष खुकुलो भएको छ र झुण्डिरहेको छ ......... यसबाट मेरो शरीरको दाहिने भाग देब्रे भागभन्दा मोटो छ... मैले के गर्नुपर्छ...?
त्यहाँ तपाईंको कुनै समस्या छैन । अर्को अण्डकोषभन्दा एउटा कम झुण्डिनु कारण एउटा हो । शरीरमा बोसो सञ्चय हुनाले अण्डकोषहरूको स्थितिमा कुनै असर पर्दैन । यो शरीरको प्रमुख भाग केही अनुपातमा थोरै भिन्न हुनु सामान्य हो । उदाहरणका लागि: यदि तपाईं दाहिने हात चलाउनुहुन्छ भने तपाईंको दाहिने हातको पाखुरा नाप्दा देब्रे हातभन्दा थोरै फरक हुन सक्दछ ।
Q राईनोफाईमा (डब्लू.सी. नाकका क्षेत्रहरु) को कसरी उपचार गरिन्छ ?
राईनोफाईमाको लागि चिरफार उपचार विकल्प हो । एउटा अलग चिरफार विकल्पहरु भित्र चिरफारमा प्रयोग गरिने सानो चक्कु वा स्कलपेल, लेजर, इलेक्ट्रो सर्जरी, डर्माब्रसन र क्राइयो सर्जरी पर्दछन् ।
Q नपच्नेँ समस्यालाई कसरी घटाउने जबकी म बिहान स्वतन्त्र गतिमा हिडडुंल नै गर्न सकिरहेको छैन । कृपया मलाई जवाफ दिनुहोस् ...
साना टुक्राहरू बनाएर चपाउँदै लिनुहोस् । दैनिक धेरै पानी पाउनुहोस् । तपाईंको आहारमा रेसाजन्य कुराहरु वा फाइबरहरु बढाउनुहोस् । तपाईंको खानामा सलाद राख्ने प्रयास गर्नुहोस् । सलाद फाइबरको उच्च स्रोत हो जसले पाचनमा मद्दत गर्दछ । दहीजस्तो कुहाएर बनाउने खानेकुराले उचित पाचनमा मद्दत गर्दछ । गाजँर जस्तै प्राकृतिक अवस्थामा खाने गर्नुहोस् । ताजा गाजँर लिनुहोस् र यसलाई पूरै खानुहोस् । यो प्राकृतिक पाचनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तपाईंको तौलमा दबाव राख्ने प्रयास नगर्नुहोस् । धेरै खाना नखानुहोस् । तपाईंको खानालाई प्रशस्त फाइबर र ताजा फलफूल र सागसब्जीसँग राम्रो तरिकाले पोषण सन्तुलित भोजनमा विभाजित गर्नुहोस् । क्याफिन, मादक पदार्थ, चिनी र चुरोटजस्ता उत्तेजकहरूले पाचन प्रणालीमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छन् । ताजा फलफूलहरू (सम्भव भएसम्म जैविक) उदाहरणका लागि स्याउ, बयर, भूईकटहर, मेवा आदि खान बढाउनुहोस् । एसिडोफिलस र बिफिडसजस्ता जीवित प्रोबोयोटिक सहितको दही भोजनको लागि एउटा बहुमूल्य अतिरिक्त छ । ताजा सागसब्जीहरु बढाउनुहोस् (सम्भव भएसम्म जैबिक) उदाहरणका लागि हरियो पातभएको तरकारीहरू, गाजँर । धेरै प्रोटीनका स्रोतहरू छनौट गर्नुहोस् जस्तै तोफू, फलफूल, नुन नहालेको कच्चा बदाम र बीउहरु र बदामको बटरहरू र माछा हाइड्रेशन छान्नुहोस्- कम्तिमा २ लीटर फिल्टर गरिएको पानी र ताजा सागसब्जीको रस दैनिक पिउनुहोस् । मर्चा र गहूंसहित मार्सी धान, जौं, गहूं, कोदो र रोटी जस्ता पूरा अन्नहरु धेरै उपभोग गर्नुहोस् ।